Email Kushambadzira Blog | Martech Zone
Email kushambadzira zvigadzirwa, masevhisi uye nhau pamwe neemail dhizaini matipi uye akanakisa maitiro evashambadziri pa Martech Zone
Patinoshanda nevatumiri veemail hombe kana kuvaendesa kune itsva email service provider (ESP), email kuendesa kwakakosha mukutsvaga mashandiro ekuedza kwavo kushambadzira email. Ndakashora indasitiri kare (uye ndinoenderera mberi) nekuti mvumo yeemail iri kudivi risiri iro reequation. Kana internet sevhisi vanopa (ISPs) vachishuvira kuchengetedza inbox yako kubva kuSPAM, saka vanofanirwa kunge vachibata mvumo yekuwana iwo maemail.
Sellfy iri nyore kushandisa eCommerce mhinduro yevasiki vari kutsvaga kutengesa zvigadzirwa zvemadhijitari uye zvemuviri pamwe nekunyoreswa uye kudhinda-pane-inodiwa - zvese kubva kune chimwe chitoro. Angave eBooks, mimhanzi, mavhidhiyo, makosi, zvinotengeswa, zvekushongedza pamba, mifananidzo, kana chero imwe mhando yebhizinesi. Tanga zviri nyore - Gadzira chitoro mune mashoma ekudzvanya. Saina, wedzera zvigadzirwa zvako, gadzirisa chitoro chako uye unorarama. Kura hombe - Shandisa akavakirwa-mukati ekushambadzira maficha kuti ukure yako yekutengesa uye bhizinesi.